Chelsea Oo Inter Kala Heshiisay Lukaku – Garsoore Sports
Chelsea Oo Inter…
Kooxda Chelsea ayaa Inter Milan kala heshiisay lacag dhan €115m si ay u hesho xiddigeedii hore ee Romelu Lukaku, 90min ayaa ku waramaysa.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belgium ayaa weydiistay Inter in laga saaro liidka cayaartooyda ee ka qeybta ah kulanka saaxiibtinimo ee Parma axadda si loo xaqiijiyo ku laabashadiisa Stamford Bridge.
Isku soo laabashadu hadda waxay u muuqataa inay soo dhowdahay, maadaama 90min ay daaha ka rogtay in Lukaku uu ogolaaday heshiis ka dhigaya laacibka ugu mushaarka badan kooxda Chelsea.
Lacagta €115m ee lagula heshiiyay Inter ayaa u dhiganta ku dhowaad 97.5 milyan oo ginni – taasoo la micno ah inay ka xishooneyso rikoorkii Ingiriiska ee ahaa 100 milyan ginni oo ay Manchester City ku bixisay saxiixa Jack Grealish khamiistii.
Ilo ku dhow xerada tababarka ee kooxda Inter gaar ahaan cayaaryahan Lukaku ayaa xaqiijiyay inuu xiddigan ku faraxsan yahay inuu ku laabto galbeedka London,
Ila wareedka ayaa yiri: “Aad ayuu ugu faraxsan yahay heshiiska la gaaray, wuu ogyahay Roman Abramovich inuu si weyn u riixay arrintan wuxuuna doonayaa inuu tuso isaga iyo Chelsea waxa uu awoodo. Qof walba waa ogyahay inuu Stamford Bridge qabyo kaga tagay. ”
Horaantii Jimcaha, wararku waxay sheegayeen in Chelsea ay damacsan tahay inay Inter usoo gudbiso laba dalab oo kala duwan. Midda koowaad waxay ahayd heshiis isdhaafsi, iyadoo Blues ay bixineysi lacag kaasha ah oo lagu daray daafac Davide Zappacosta oo garabka middig ah, halka kan labaadna uu ahaa heshiis toos ah oo €115m dhan. Waxay u muuqataa in Inter ay haatan dooratay inay qaadato dooqa dambe.